Ikhaya / Imfundo noPhando / Research / Forex News
Live Live Forex News
I-FXCC izama ukugcina abahwebi bethu beFX baziswa rhoqo ngokupapasha: ukwaphula iindaba, imbono, iinyani, izibalo, izilumkiso njl. kwicandelo lethu leendaba zeFX. Siyakukugcina nolwazi, ngokusebenzisa iziteshi zentlalo zentlalo, kunye nekhonkco kuzo zonke iimpapasho zethu.
Bonke abathengisi abanamava baya kubeka ubungqina malunga nendlela iimicimbi ezinkulu zezoqoqosho kunye nempembelelo ephakamileyo yeendaba eziphathekayo zexabiso lemali. Ingaba ungumkhweli; mhlawumbi usebenzisa iindlela zokuthengisa ezizenzekelayo kunye nabacebisi beengcali ukuba bathengise iimarike ze-FX, ezifuna ukuphendula ngombane ngokukhawuleza. Okanye ungumthengisi we-swing; othabatha indlela eqwalaselweyo ngakumbi phambi kokuvala okanye ukuguqula isikhokelo sorhwebo, ukugcina phezulu kweemeko zeendaba ziyimpumelelo ebalulekileyo xa kuthengiswa iFX.